Naseho ny : 18 jona 2022
Naseho ny : 11 jona 2022
Ny diabeta dia fiakaran'ny fatran'ny siramamy ao amin'ny ra, izay mety hihaotra ny 1,27g/l. Nandritra sy tao anatin'ny vanim-potoana ny valan'aretina Covid19 teo dia niakatra ny fahafantarana ny isan'ny olona marary ny diabetra no ny fitomboan'ny fitaovana ahafahana mitily isam-batan'olona. Ny fitiliana HbA1c dia manome fampahalalana momba ny kalitaon'ny ra sy ny siramamy mandritra ny 4 ka hatramin'ny 8 herinandro mialoha ny fitiliana. Ny diabeta dia miteraka voka-dratsy maro : ny fahasimban'ny lalan-dra madinika sy ny lalan-dra vaventy, ny fiakaran'ny tosi-dra, ny AVC, olana eo amin'ny voa, fery tsy mety sitrana...
Ny fialàna amin'ny sigara
Naseho ny : 28 mey 2022
Ny 31 mey dia andro maneran-tany tsy hifohana sigara. Ny taova mety ho simba rehefa mifoka sigara ny olona dia maro fa isan'ireny ny avokavoka sy ny taovam-pisefoana. Ny voka-dratsy ny sigara dia mety hakasika ny vatana sy ny taova manontolo : fo, ati-doha, lalan-dra, tosidra ary mety hiafara amin'ny homamiadana. Ny fiankinandoha amin'ny sigara dia vetivety dia haingana be ny fiatraikany. Loza ho an'ny manodidina, izay tsy mpifoka sigara ny fisian'ny olona mpifoka iray. Ny olona te hiala amin'ny sigara dia mila manana finiavana sy faharesen-dahatra anaty. Ny fiankinandoha amin'ny sigara dia azo sitranina. Ny olona te hiala amin'ny sigara dia mila fanampiana amin'ny olona manodidina azy, ara-tsaina sy ara-tsakafo...
Ny volo sy ny hodi-doha (2)
Naseho ny : 14 mey 2022
Mba hitazomana ny fahasalaman'ny volo sy ny hodi-doha dia tokony hanasa loha in-dray isaky ny herinandro farafaharatsiny, ary tokony ho jerena tsara ny kalitaon'ny savony hampiasaina sy ireo ankora haosotra. Rehefa manasa loha dia ezahina tsara mba tsy hisy rano-tsavony na ankora hafa tavela, noho izany dia atao tsara kobana. Raha vao misy fisehoana zavatra mampiahiahy ny hodi-doha dia tokony hamonjy toeram-pitsaboina...
Pejy 1 amin'ny 16
[Miara-dalana] Zoma 24 jona 2022
♦ Notanterahana ny sabotsy 18 jona 2022, ny fanatontosana ny horonan-tsary fanentanana momba ny JMJ Mada X, sy ny famoriana ny anjara biriky ho fizakana ny JMJ Mada X, ao Antsirabe... ♦ Nomarihana tao Mandritsara ny faha-70 taonan'ny Fikambanan-dry Masera Fo Masin'i Jesoa sy Fo Madion'i Maria... ♦ Hotanterahana ny 1 ka hatramin'ny 3 jolay 2022 ny Andron'ny Ankizy eto Antananarivo...